काठमाडौं (अस) । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट प्रभावितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म रू. १ खर्ब ४४ अर्ब लगानी गरेको छ । ४ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्र्राधिकरणले ४ लाख ८० हजार २७ निजी आवास निर्माणका लागि उक्त रकम खर्चेको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावितलाई सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि रू. ३ लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त अनुदान पाएर घर बनाउनेहरू ६३ प्रतिशत पुगेका छन् । प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रू. ५० हजार, दोस्रो रू. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रू. ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको मंगलवारसम्मको तथ्यांक अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ गरी ३१ जिल्लाका ७ लाख ७९ हजार ८३२ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ता अनुदान लिनेको संख्या ७ लाख ६८ हजार ७६९ पुगेको छ । यस्तै दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको संख्या ६ लाख १९ हजार २६८ र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार २९१ पुगेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सघाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अनुदानबाट निर्माणाधीन घर तथा निजी आवासको संख्या ६ लाख ६८ हजार ३३१ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
अहिले भूकम्पपीडितका आवास भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । सरकारको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना अनुसार निजी आवास निर्माणका साथै पुरातात्त्विक सम्पदा, विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यचौकी लगायत भौतिक संरचना बनाउन रू. ९३८ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित कुल बजेट रू. ७४ अर्बमध्ये रू. २२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित बजेट रू. १ खर्ब ५१ अर्बमध्ये रू. ५० अर्ब ५६ करोड खर्च भएको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार निजी आवास निर्माण सहित अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि रू. २ खर्ब ३७ अर्ब ५१ करोड लगानी÷खर्च भइसकेको छ । भूकम्पपछि तत्काल गरिएको वित्तीय आवश्यकता अध्ययन अनुसार ५ वर्षको अवधिमा ९३८ अर्ब लगानी आवश्यक हुने औल्याइएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बाँकी निजी आवास पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने बताए ।
एक दशकसम्म पनि बनेनन् कर्णाली राजमार्गका १३ पुल[२०७६ चैत, ६]
प्रदेश १ को प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार[२०७६ मंसिर, १८]
साइकल लेन निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै ललितपुर महानगर[२०७६ मंसिर, १८]
म्याग्दीको मूल सडकमै स्थानीयले लगाए भोटेताल्चा
गभर्नर पाएपछि खोटाङ जिल्लाबासीमा खुशीयाली
बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई सघन उपचार कक्षमा सारियो
यूएईका नागरिकसरह नेपालीले उपचार पाउने